ကံကိုပဲ အားကိုးရတော့မှာပေါ့ ကလေးတို့ရေ… ကယ်ဆယ်ရေး နောက်ဆုံး အခြေအနေ
ကံကိုပဲ အားကိုးရတော့မှာပေါ့ ကလေးတို့ရေ…
ဂူ ထဲဝင်သွားတဲ့ ကလေးများ တစ်ညအိပ်ပြီးနောက် လက်ရှိ အခြေအနေ သတင်း
ကလေးတွေဝင်သွားချိန်တုန်းက ရေမတက်သေးပေမဲ့ ကလေးတွေဝင်သွားပြီးတဲ့နောက် ရေတွေတက်လာတာကြောင့် ကလေးတွေ ပြန်ထွက်ရခက်သွားတဲ့အခြေအနေရှိသွားတယ်လို့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကဆိုပါတယ် နောက်ဆုံးမှာကလေးတွေက ရွံနွံတွေ ကိုဖြတ်ပြီး ကျောက်တောင်ကို ကုတ်ပြိးတက်သွားတဲ့လက္ခဏာတွေ တွေ့ ရတယ်လို့ ချင်းရိုင်ကလာတဲ့သတင်းတချို့ မှာပါတယ် ။
အဲဒီလှိုင်ဂူဟာ မှောင်မဲနေပြီးကလေးတွေအနေနဲ့ ဓါတ်မီးလည်းကောင်းကောင်းပါသွားပုံမရသလို ရေတွေဆက်တက်လာတဲ့အတွက် အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက် တွေ့ တဲ့အပေါက်ကို ဆက်တက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်တွေပဲ ရှိနေပါတယ် ။
အဲဒီလှိုင်ဂူကြီးရဲ့ အကျယ်အ၀န်း (၈ )Rai လောက်ရှိပြီး ၃၂၀၀ပေလောက် ကျယ်ဝန်းတာပါ ဒီထဲမှာကျောက်တောင်အကြီးအငယ်များလည်း အများအပြားရှိပြီး ကျောက်ကြိုကျောက်ကြားတွေကအပေါက်များစွာရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် ။
တချို့ အပေါက်တွေက တွားသွားပြိး ငုံ့ဝင်ပြီး တက်ရသလို အလင်းမရှိ မှောင်မဲနေပြီး ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ် ဒီကျောက်တောင်တွေကြားထဲမှာ မှောင်မဲနေတာကြောင့် သူတို့အချင်းချင်းလည်းလူစုကွဲသွားနိုင်သလို ကလေးတွေလည်း အပေါက်များစွာကြားထဲကိုရောက်သွားနိုင်တာမို့ အားလုံးကို ပြန်ရှာတွေ့ နိုင်ဖို့ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ် ။
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကတော့ ရေနဲ့ရွံနွံတွေကြားမှာ ဆက်တက်ပြီးကလေးတွေကို ရှာတွေ့ ဖို့ ဆိုတာခဲယဉ်းသွားပြီးမို့ ဒီနေ့အဖို့ လက်လျော့လိုက်ကြပါပြီ။
ဒီလှိုင်ဂူမှာနှစ်စဉ်လူပျောက်တာတွေရှိပြီး ၃ရက်လောက်နေ့မှ ရှာတွေ့ တာမျိုး ၁၀ရက်နေမှရှာတွေ့ တာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒါပေမဲ့ အဲဒီကာလတွေတုန်းကအခုလိုရေတွေများနေတဲ့အချိန်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတောင်မှ ရှာတွေ့ ဖို့ အခက်အခဲရှိခဲ့တယ်လို့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သူတွေကဆိုပါတယ် ။
အခုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေကတော့ အသက် (၁၁)နှစ်ကနေ အသက် (၁၇)နှစ်အရွယ်ကလေးအားလုံး ၁၂ဦးဖြစ်ပြီး အသက် (၂၅)နှစ်အရွယ်နည်းပြဆရာလေး နဲ့ဆိုရင် အားလုံး(၁၃)ဦးပါ ။
ကလေးငယ်လေးတွေဆိုတော့ ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်နေရှာမလဲမသိဘူး ။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ဘေးကြုံရတဲ့အခါ ကူသူကယ်သူမတွေ့ ရခင်မှာ ထိပ်လန့်နေမှာပေါ့လေ ။
သူတို့ တွေအသက်ရှင်လျှက် ပြန်တွေ့ ရနိုင်ဖို့အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးတွေ ဆက်လုပ်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ် ။
ကလေးတွေကံကောင်းကြပါစေလို့ ပဲဆုတောင်းနေမိပါတော့တယ် !!!!
Aye Aye Mar (Saw)
မယ်ဆိုင်ဂူ ကယ်ဆယ်ရေး နောက်ဆုံး အခြေအနေ
The Irrawaddy – Burmese Edition is live
ကံကိုပဲ အားကိုးရတော့မှာပေါ့ ကလေးတို့ရေ…
ဂူ ထဲဝငျသှားတဲ့ ကလေးမြား တဈညအိပျပွီးနောကျ လကျရှိ အခွအေနေ သတငျး
ကလေးတှဝေငျသှားခြိနျတုနျးက ရမေတကျသေးပမေဲ့ ကလေးတှဝေငျသှားပွီးတဲ့နောကျ ရတှေတေကျလာတာကွောငျ့ ကလေးတှေ ပွနျထှကျရခကျသှားတဲ့အခွအေနရှေိသှားတယျလို့ ကယျဆယျရေးလုပျနသေူတှကေဆိုပါတယျ နောကျဆုံးမှာကလေးတှကေ ရှံနှံတှေ ကိုဖွတျပွီး ကြောကျတောငျကို ကုတျပွိးတကျသှားတဲ့လက်ခဏာတှေ တှေ့ ရတယျလို့ ခငျြးရိုငျကလာတဲ့သတငျးတခြို့ မှာပါတယျ ။
အဲဒီလှိုငျဂူဟာ မှောငျမဲနပွေီးကလေးတှအေနနေဲ့ ဓါတျမီးလညျးကောငျးကောငျးပါသှားပုံမရသလို ရတှေဆေကျတကျလာတဲ့အတှကျ အသကျရှငျနိုငျဖို့အတှကျ တှေ့ တဲ့အပေါကျကို ဆကျတကျသှားနိုငျတယျဆိုတဲ့ ယူဆခကျြတှပေဲ ရှိနပေါတယျ ။
အဲဒီလှိုငျဂူကွီးရဲ့ အကယျြအဝနျး (၈ )Rai လောကျရှိပွီး ၃၂ဝဝပလေောကျ ကယျြဝနျးတာပါ ဒီထဲမှာကြောကျတောငျအကွီးအငယျမြားလညျး အမြားအပွားရှိပွီး ကြောကျကွိုကြောကျကွားတှကေအပေါကျမြားစှာရှိတယျလို့လညျးဆိုပါတယျ ။
တခြို့ အပေါကျတှကေ တှားသှားပွိး ငုံ့ဝငျပွီး တကျရသလို အလငျးမရှိ မှောငျမဲနပွေီး ကွောကျစရာကောငျးတယျလို့လညျးပွောကွပါတယျ ဒီကြောကျတောငျတှကွေားထဲမှာ မှောငျမဲနတောကွောငျ့ သူတို့အခငျြးခငျြးလညျးလူစုကှဲသှားနိုငျသလို ကလေးတှလေညျး အပေါကျမြားစှာကွားထဲကိုရောကျသှားနိုငျတာမို့ အားလုံးကို ပွနျရှာတှေ့ နိုငျဖို့ခကျခဲနဆေဲဖွဈပါတယျ ။
ကယျဆယျရေးလုပျနသေူတှကေတော့ ရနေဲ့ရှံနှံတှကွေားမှာ ဆကျတကျပွီးကလေးတှကေို ရှာတှေ့ ဖို့ ဆိုတာခဲယဉျးသှားပွီးမို့ ဒီနအေ့ဖို့ လကျလြော့လိုကျကွပါပွီ။
ဒီလှိုငျဂူမှာနှဈစဉျလူပြောကျတာတှရှေိပွီး ၃ရကျလောကျနမှေ့ ရှာတှေ့ တာမြိုး ၁ဝရကျနမှေရှာတှေ့ တာမြိုးတှလေညျးရှိခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ ဒါပမေဲ့ အဲဒီကာလတှတေုနျးကအခုလိုရတှေမြေားနတေဲ့အခြိနျမြိုးတော့မဟုတျဘူးလို့ဆိုပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာတောငျမှ ရှာတှေ့ ဖို့ အခကျအခဲရှိခဲ့တယျလို့ ကယျဆယျရေးလုပျသူတှကေဆိုပါတယျ ။
အခုပြောကျဆုံးသှားတဲ့ကလေးတှကေတော့ အသကျ (၁၁)နှဈကနေ အသကျ (၁၇)နှဈအရှယျကလေးအားလုံး ၁၂ဦးဖွဈပွီး အသကျ (၂၅)နှဈအရှယျနညျးပွဆရာလေး နဲ့ဆိုရငျ အားလုံး(၁၃)ဦးပါ ။
ကလေးငယျလေးတှဆေိုတော့ ဘယျလောကျတောငျကွောကျနရှောမလဲမသိဘူး ။ဘယျသူပဲဖွဈဖွဈ အသကျဘေးကွုံရတဲ့အခါ ကူသူကယျသူမတှေ့ ရခငျမှာ ထိပျလနျ့နမှောပေါ့လေ ။
သူတို့ တှအေသကျရှငျလြှကျ ပွနျတှေ့ ရနိုငျဖို့အတှကျ ကယျဆယျရေးတှေ ဆကျလုပျနရေဆဲဖွဈပါတယျ ။
ကလေးတှကေံကောငျးကွပါစလေို့ ပဲဆုတောငျးနမေိပါတော့တယျ !!!!